किसानहरुको भन्छन, जनप्रतिनिधिहरु आउनुहोस्, राहत स्वरुप हाम्रो सब्जी लिएर जानुहोस्, नष्ट त हुन्न (भिडियो सहित्) – Namaste Dainik
April 17, 2020 NamastedainikLeaveaComment on किसानहरुको भन्छन, जनप्रतिनिधिहरु आउनुहोस्, राहत स्वरुप हाम्रो सब्जी लिएर जानुहोस्, नष्ट त हुन्न (भिडियो सहित्)
मोरङ- लकडाउनका कारण यातायात र बजार ठप्प भएपछी किसानहरुको बालीहरु कुहिन थालेका छन । पाकेका बालीहरुले बजार नपाए पछि मोरङको पथरीशनिश्चरे वडा नं. ६ मिश्री लाल चोक पिप्ले डाडाका किसानहरु मारमा परेका हुन् ।
यसै बिच अर्का एक किसान भन्छन् , पर्ने रकम भन्दा घटीमा हामी सब्जी दिन्छौ लानुहोस भन्दा पनि बिक्री भइरहेको अबस्था छैन ! बरु नगरका जनप्रतिनीधीहरु आएर राहत स्वरुप हाम्रो नस्टहुने सब्जीहरु लगेर राहत बाडे कमसेकम खेर त जाने थिएन ! राम चन्द्र महतो बताउछन्
भिडियो हेर्नुहोला ।
राष्ट्रपतिको निर्देशनलाई पालना नगरेर ब्राजिलका स्वास्थ्यमन्त्री बर्खास्त
धागोले बनाएको गरगहना : महिला स्वरोजगारको लागि